तीजमा वाटरप्रुफ मेकअप उपयुक्त - अन्तर्वार्ता - नारी
तीजमा वाटरप्रुफ मेकअप उपयुक्त
- सावित्री लिम्बू अमात्य
तीजमा कस्तो मेकअप गर्दा धेरै समय टिक्छ ?
तीजमा हल्का तथा वाटरप्रुफ मेकअप गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बढी नाचगान गर्दा पसिना आएर मेकअप पखालिने भएकाले वाटरप्रुफ मेकअप गर्नुपरेको हो । मेकअप सकिएपछि मेकअप सेट स्प्रे गर्नुपर्छ ।
कसरी घरमै सजिलै मेकअप गर्न सकिन्छ ?
क्निन्जिङ क्रिमले अनुहार सफा गर्ने । छाला तैलीय छ भने वेट टिस्यु मात्र प्रयोग गरेर फेस सफा गर्ने । त्यसपछि हल्का मोइस्चराइजर लगाएर स्किन टोनअनुसार फाउन्डेसन दल्ने । मेकअप फाउन्डेसनमै भर पर्ने भएकाले त्यो आफूलाई सुहाउने हुनुपर्छ अन्यथा जस्तो राम्रो मेकअप पनि फिक्का हुन्छ । त्यसपछि कम्प्याक पाउडरले मेकअपलाई सेट गर्ने । यसले मेकअपलाई दिनभरि सेट राख्छ ।
आई र लिप मेकअप कस्तो हुनुपर्छ ?
फाउन्डेसन तथा कम्प्याक पाउडर लगाएर मात्र लिपिस्टिक दल्ने अनि टिस्युले ड्याप गर्ने । पाउडर लगाएर फेरि लिपिस्टिक लगाउँदा लिपिस्टिक लामो समयसम्म टिक्छ । तीजका लागि भाइब्रेट कलर अरेन्ज, पिंक तथा रेड लिपिस्टिक उपयुक्त हुन्छ । आई मेकअप डार्क छ भने गोल्ड, पिंक, ब्राउन आदि हल्का लिपिस्टिक राम्रो देखिन्छ । रातो पहिरनसँग आँखालाई स्मोकी बनाउन सकिन्छ । यसमा गोल्ड स्याडो बेस गरेर कालोले मर्ज गर्दा अझ आकर्षक देखिन्छ । आई लिडमा हल्का फाउन्डेसन लगाउने जसबाट आइस्याडोको वास्तविक रंग आउँछ । आइ बोनमा हाई लाइटर आइस्याडो लगाउने र तलको भागमा जुन कलरको आइस्याडो मन पर्छ त्यही लगाउने । गाजल लगाइसकेपछि मस्कारा लगाउँदा आँखा आकर्षक देखिन्छ । आइस्याडो, गाजल तथा मस्कारा सबै वाटरप्रुफ नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तीजमा केशको स्याहारका लागि के गर्न सकिन्छ ?
महिना दिनअघिदेखि नै केशको स्याहार गर्नुपर्छ । माछाको तेलले मसाज गर्दा केशमा चमक आउँछ । माछाको तेल छैन भने आलमन्ड र ओखरको पेस्ट हप्ताको एकपटक लगाउने । त्यसले केशमा साइनिङ ल्याउनुका साथै केशलाई झर्नबाट समेत जोगाउँछ । यसले गर्दा तीजमा दिनभर घाममा बस्दा पनि केशको चमक जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
तीजमा कस्तो हेयर स्टाइल सुहाउँछ ?
केशको डिजाइन गर्दा अगाडि थोरै पफ उठाएर साइड सिउँदो बनाउने र लाछा लगाएर बाट्ने अनि साइडमा चन्द्रमा, नत्थी वा रातो फूल सिउरिने ।
तीजमा कस्तो मेहन्दी उपयुक्त हुन्छ ?
तीजमा आफ्नो इच्छानुसार रिसर्व, कोहिनुर, मारवाडी, राजस्थानी आदि कलात्मक डिजाइनका मेहन्दी लगाउन सकिन्छ । तीजका लागि अरेबिक मेहन्दी नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । मेटालिक, फेब्रिक तथा गोल्डेन मेहन्दी फेन्सी डिजाइनको मेहन्दी हुन् । ग्लिटर टाटु, ब्ल्याक, ब्राउन मेहन्दी टेम्पररी टाटुज हुन् । मेहन्दी छानेर मात्र लगाउनुपर्छ किनभने यसलाई लगाएपछि तुरुन्तै मेटाउन सकिँदैन ।
मंसिर ५, २०७५ - ब्रसले मेकअप सहज
भाद्र २०, २०७५ - तीज मेकअप
भाद्र १९, २०७५ - छालालाई तन्दुरुस्त राख्न
भाद्र ५, २०७५ - वर्षाका लागि कस्तो मेकअप उपयुक्त हुन्छ ?
श्रावण १६, २०७५ - वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनका असर
जेल नेल एक्सटेन्सन कार्तिक २४, २०७५
म धेरै भाग्यमानी छु कार्तिक ९, २०७५
वैकल्पिक ऊर्जा सोलार पावर आश्विन ११, २०७५
नीलम कार्की ‘निहारिका’लाई आठ प्रश्न आश्विन ७, २०७५
हट स्टोन मसाज भाद्र २८, २०७५
तीजअघिको तयारी भाद्र २५, २०७५